Yongeza i-LinkedIn Inkampani Landela iQhosha | Martech Zone
Yongeza i-LinkedIn Inkampani yokulandela iqhosha
NgoLwesibini, Februwari 28, 2012 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Ndiyayithanda kakhulu inyani yokuba i-LinkedIn iya kuba liqonga leendaba losasazo lwasentlalweni elingummangaliso. Kwishishini ukuya kubathengi (B2B) abathengi kunye nabathengisi, ukulandela iinkampani ekuhlaleni kwi-LinkedIn kunokubonelela ngolwazi olukhulu kwiimveliso zabo, iinkonzo kunye nolwazi lweshishini. Xa ufumana ithuba, kuya kufuneka ukhuphele ii -apps ze-LinkedIn zokusebenza zesoftware-ulungelelwaniso olululo lwealgorithm yazo yokuchonga iindaba eziphambili kunye nezihloko ngaphakathi kwenethiwekhi yeshishini lakho.
I-LinkedIn ngoku ibonelela ngeqhosha kumalungu ukuba alandele ishishini lakho:
Qalisa nje ngokuchwetheza igama lenkampani yakho kumyili weqhosha labo kwaye ukhethe ekukhupheleni ngokuzenzekelayo. Ukuba awukho apho, unokufuna ukwenza inkangeleko yenkampani… kucetyiswa kakhulu!
Ungabona iqhosha lisebenza apha iarhente yemidiya yoluntu indawo. Qiniseka ukuba usilandele!
tags: LinkedInInkampani edibeneyoumphuhlisi onxibelelanisiweyolinkin ilandelelinkin yokulandela iqhoshalinkin kwiingcebiso
Inani eliphambili loku-1 kwii-CMOs ngo-2012
Iplagi yoBunini yeWordPress